Manchester United oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato ciyaaryahan ka tirsan kooxda Juventus – Gool FM - Idman news
Manchester United oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato ciyaaryahan ka tirsan kooxda Juventus – Gool FM
(Manchester) 08 Abriil 2021. Manchester United ayaa qorsheyneysa inay lasoo saxiixato ciyaaryahan ka tirsan kooxda Juventus, si ay ugu guuleysato adeegiisa inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Xiddiga kooxda Juventus ee Dejan Kulusevski ayaa qeyb ka soo noqday liiska musharaxiinta lala xiriirinayo inay u dhaqaaqi doonaan Manchester United, inta lagu jiro suuqa xagaaga ee soo socda.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Express” ee dalka England ciyaaryahanka reer Sweden ayaa bar-tilmaameed u noqday kooxda Manchester United, xilli laacibkan uu ku dhiban yahay inuu fursad ka helo tababaraha Juventus ee Andrea Pirlo.
Andrea Pirlo ayaa ku tiirsan adeega Federico Chiesa in kabadan Dejan Kulusevski, taasoo u horseedi karta laacibkii hore kooxda Parma inuu doorbido fikirka ah inuu ka tago Bianconeri xilli ciyaareedka soo socda.
Haddii ay Juventus ku guuldarreysato inay u soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka soo socda, way ku adkaan doontaa maamulka kooxda inay diidaan dalabyada laga soo gudbinayo Dejan Kulusevski, taasoo laga yaabo inay ka faa’ideysato Manchester United si ay u hesho adeega ciyaaryahanka reer Sweden.
Previous Usain Bolt oo kala dooran waayay Ronaldo iyo Messi, laakiin sheegay waxa uu Kabtanka Portugal kaga wanaagsan yahay midka Argentina – Gool FM
Next Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Arsenal iyo Slavia Prague ee Europa League oo la shaaciyey – Gool FM
Kooxda Inter Milan oo isaga baxday tartanka European Super League – Gool FM
Kaddib go’aankii ay kooxaha England uga go’een Super League, aas-aasayaasha tartankan oo go’aan cad ka gaaray fikraddooda… (Miyuu burburay ESL?)
Angola oo Soomaaliya iyo Kenya u soo magacaawday hal safiir – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Angola oo Soomaaliya iyo Kenya u soo magacaawday hal safiir – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia April 21, 2021
Shares in pharma giant Roche rise as COVID-19 tests offset drug sales slump April 21, 2021